Pasitera Rasendrahasina Lala : « Misy ambadika politika ireny fanosoram-potaka ireny » | NewsMada
Pasitera Rasendrahasina Lala : « Misy ambadika politika ireny fanosoram-potaka ireny »
Nitondra valin-kafatra. « Fanosoram-potaka ireny an-gazety ireny. Miseho koa izany fa efa hanova ny mpitantana ny eo anivon’ny FJKM ka tsy mahagaga. Misy mpanao politika sasany te hampiditra ny olony amin’ny fitantanana ny fiangonana ary efa voamarinay izany », hoy izy, omaly tamin’ny haino aman-jery iray, nitondra fanazavana. Nohitsiny fa efa fantatra avokoa ny momba izany rehetra izany. Nilaza ny tsy hitory anefa ny tenany na eo aza izany rehetra izany. « Tsy azo sakanana amin’ny fitoriana mety hataony ny kristianina… Efa tena voaomana sy mipetrapetraka tsara iny tranga iny. Sahirana hatramin’ny mpitandro filaminana aza nilaza fa misy ambadika politika iny raharaha iny… Tsy mipetra-potsiny ny fianakaviana fa efa mikaroka ny marina ary efa fantatra ny nanao izany», hoy ihany izy.
Nambarany fa tena fanalam-baraka amin’ny fidirana ny fiainan’olona ireny. Toerana efa fandehanany rehefa miotra sady ara-dalàna io eo Antanimena io, araka ny fanamafisany. « Azo hamarinina izany. Mahagaga anefa fa efa nisy nanamarika ka natao resaka niaingana fotsiny ilay fitaratra mainty an’ny fiarako. Tanjon’ny sasany anefa ny hahatongavana amin’iny raharaha iny… », hoy izy.
Efa voasoketa tahaka izao koa ny taona 2012
Tsy vao voalohany rahateo ny tranga nahazo ny filohan’ny FJKM sady filoha mpiara-mitantana ny FFKM fa efa niseho izany ny taona 2012, nialoha ny synaoda natao tany Manakara. Voasoketa ho nampiantrano ny « Radio piraty na onjam-peo tsy ara-dalàna », teny amin’ny sekoly Rasalama maritiora Ambohipotsy ny tenany. « Miverina indray izany izao, mialoha ny synaoda hatao any Antsirabe amin’ny volana aogositra izao », hoy ihany izy.
Raha tsiahivina ny tranga niseho ny 17 febroary teo, efa mandeha amin’ireny toerana fiorana ireny ny tenany rehefa tsy afaka ilay mpanotra ny fianakaviana. Efa fanaony hatramin’ny ela izany, saingy nandefasana polisy ny tamin’ity indray mitoraka ity. Tsy vitan’izany fa natao nahoraka fa mandeha amin’ny tranon-dopy ny mpitandrina Rasendrahasina Lala.
Midika izany fa tokony hifarana eo sy tsy ho tonga amin’ny resabe intsony ny raharaha ?